Socdaalka Mario Kart waxaa hada laga heli karaa App Store | Wararka IPhone
Tan iyo markii shirkadda Japan ay ku dhawaaqday inay ka shaqeyneyso nooc ka mid ah Mario Kart illaa ay ugu dambeyntii aragto iftiinka, ku dhowaad laba sano ayaa laga soo gudbay. Mid ka mid ah sababaha dib-u-dhiggan waxaa ugu wacan dib-u-eegista xun ee ay heshay betas-tii ugu horreysay ee ay billowday dhammaadkii Maajo.
Sugitaan dheer kadib, dhowr saacadood, Mario Kart Tour ayaa hadda la heli karaa si looga soo dejiyo Apple App Store (Waxa kale oo laga heli karaa Google Play Store). Sida dhammaan cayaaraha hadda lagu bixiyo App Store, Mario Kart Tour waxaa loo heli karaa soo degsasho bilaash ah oo la midoobaya iibsashada barnaamijka.
Sharaxaadda ciyaarta, waxaan ka akhrisan karnaa:
Mario iyo shirkaddu waxay ka qaybqaadan doonaan wareegtooyin ay dhiirigeliyeen magaalooyin kala duwan oo adduunka ah iyo wareegyada caadiga ah ee Mario Kart qaybtan cusub ee taxanaha ah Magaalo waliba waxay soo muuqan doontaa xilli kala duwan waxayna isbadali doontaa labadii toddobaadba mar. Marka lagu daro jilayaasha caanka ah ee Mario Kart, ciyaartan waxaa jiri doona wadayaal mawduucyo la xiriiri doona magaalooyinka xilli ciyaareed kasta.
Si loogu raaxeysto cinwaankan cusub ee 'Mario' ee mobilada, qalabkeenna waa in la maareeyaa macruufka 10 ama ka sareeya, marka waa mid ku habboon iPhone 5s wixii ka dambeeya. Marka la eego wax soo iibsiga barnaamijka, midka ugu jaban ayaa lagu qiimeeyaa 2,29 euro kan ugu qaalisanna waa 74,99 euro.
Ganacsiga faa iidada badan leh ee iibsashada gudaha, gaar ahaan cinwaannada Nintendo, waa a ganacsi si macquul ah shirkaddu u rabto inay u siibto siibashada oo aysan rabin inay cid la wadaagto, Sidaa darteed, midkoodna cinwaannada Nintendo na siiya maanta, labadaba macruufka iyo Android, kuma jiraan oo weligoodna kuma sii jiri doonaan Apple Arcade sida Google Play Pass, adeegyada diiwaangelinta ciyaarta fiidiyowga ee labada shirkadood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Mario Kart Tour ayaa hadda laga heli karaa App Store
Ciyaar qabow, culiado !!!
iMovie iyo Clips waxay horeyba ula jaanqaadeen habka mugdiga ah ee iOS 13 iyo waxyaabo cusub